Bogga ugu weyn Sida lacag looga helo kaydinta 2022 | Talo Run ah
Waxaa laga yaabaa inaan aad ugu faraxsanahay inaan la wadaago fikradayda kaydka intii aad tan akhrin lahayd. Si kasta oo ay tahay xaalku, ku soo dhawow my super dope, aad iyo aad-u-faraxsan-aadna uga naxay-inaan-ugu-dambayntii-ku-baro-sida-aad lacag uga samaysato kaydkaaga Qoraal (Qalbi qosol).
Hagaag, waa halkaan ah iyo ah aniga, mise hadda waa loo sacbiyaa? Kaliya iska daa aniga in kastoo!
Had iyo jeer waxaa jiray fikrad khaldan oo ah in kaydku uu noqdo qayb ka mid ah lacagtaada oo la iska dhigo sidii qof wax -garad caqli badan leh. Ma taqaanaa sida aad u qaybsato dakhligaaga, ugu yeedh qayb 'lacag caddaan ah oo la isticmaali karo' oo u yeedh qaybta kale oo aadan weli lahayn qorshe kharash -garayn, "kayd"?
Halkaas ayay dhibaatadu ka jirtaa. Ma lihid qorshe kharash -garayn 'kaydinta' weli, laakiin markaad ugu dambayntii samayso, shaki la'aan waad ku bixin doontaa, DHAMAAN xitaa. Haddaba? Runtii ma u yeeri karnaa kaydkaaga? Uma maleynayo!
Kaydintu waa qayb ka mid ah lacagtaada meel-ka-baxsan ee loogu talagalay inay adiga kuu shaqayso. Fikradda ah in laguula shaqeeyo ayaa ah, waa lacagtaas in loo isticmaalo in lagu sameeyo maalgashiyo qiimo leh si loo sugo mustaqbal hodan ah. Su'aashu hadda waxay tahay, "Sidee kaydkaagu lacag kuugu samayn karaa?"
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa sida kaydkaagu lacag kuugu sameeyo (sida lacag looga helo kaydkaaga) iyo fikradaha maalgashiga ay tahay inaad tixgeliso si aad u kobciso boqortooyadaada hantida la beegsaday. Waad la yaabi doontaa oo gebi ahaanba waad afuufi doontaa inaad ogaato inaad ka dhisi karto boqortooyada hantidaada kaydka kaliya.
Dhanka kale, waxaan ka hadalnay su'aalo gaar ah oo laga yaabo inaad ka qabto kaydinta, isla markiiba hoos.
Maxaan U Kaydiyaa?
Sababtoo ah ma jiro qof bini'aadam ah oo dhulka jooga oo runtii raba in la jebiyo, la jabiyo, koraan jabto ama xitaa dhinto jab, waa lagama maarmaan in la raadsado habab lagu kalsoonaan karo si loogu noolaado si ka sarreysa khadadka saboolnimada. Kaydintu waa tallaabo aad u dhiirran si loo gaadho tan.
Xaqiiqdu waxay tahay, kaydinta lacagtu waa mid ka mid ah dabeecadaha maaliyadeed ee ugu wanaagsan ee aad raaci karto, iyadoo leh faa'iidooyin badan oo la xaqiijiyay. Laakiin haddii aysan kuu sahlaneyn inaad lacag keydsato, ama haddii aadan arkin dhibicda, waa iska caadi inaad isweydiiso sababta ay muhiim u tahay inaad lacag keydsato?
Kaydinta lacagtu waa muhiim maxaa yeelay waxay kaa caawineysaa badbaadintaada haddii ay jirto xaalad degdeg ah oo maaliyadeed. Intaa waxaa dheer, keydinta lacag caddaan ah ayaa kaa caawin doonta inaad yeelato maalgashiyo waaweyn, ka hortagto deynta, yareyso culeyskaaga maaliyadeed, ka tagto dhaxal dhaqaale, oo ku siiso dareen weyn oo madaxbannaan maaliyadeed.
Waxaa jira run ahaantii sababo aan dhammaad lahayn oo lacag lagu keydsado. Waxa ugu muhimsan si kastaba ha ahaatee, waa sida lacag looga helo kaydka.
Miyaad taajir ku noqon kartaa keydinta?
Tiro badan oo qoraayaal ah iyo kuwa kale oo badan, ayaa dhowr jeer qabay in kaydkaagu uusan kaa dhigi karin mid hodan ah, iska dhaaf fadlan.
Waa kuwan runta qoto dheer; falkii ugu horreeyay ee xoolo lagu dhiso, waa badbaadin! Qof kasta oo si kale u dhaha, prolly wuxuu leeyahay fikrad ka fiican taas oo dabcan, aan jirin.
Aynu sahamino ereyada Arkad in Ninka ugu Taajirsan Baabuloon Waxaa qoray George Samuel Clason, "Dhab ahaantii waa sharci ilaahyada in kii ilaaliya oo aan ku bixin qayb ka mid ah dakhligiisa oo dhan, dahabku si fudud buu u iman doonaa. Sidaas oo kale kii kiishkiisu madhan yahay dahabku waa iska ilaaliyaa."
George si fiican uma habayn kari lahayd tan. Waa sida tan oo kale, markasta oo aad keydsato qayb ka mid ah dakhligaaga, lacag badan ayaa soo jiidata.
Markaa, si aad hodan u noqoto, waa inaad ku bilowdaa inaad haysato ugu yaraan 10% dakhligaaga. Waxa kaa dhigaya hodan ma aha inta dakhli ee aad soo saarto, maya, waa halkii inta dakhligaas ah ee aad haysan karto (keydsato) ka dibna shaqo kuu qaban karto.
Marka xigta, waxaan ku tusi doonaa sidaad lacag badan u soo jiidato adoo kaydinaya lacag. Aynu nidhaahno waxaad ku jirtaa uun isbadal ku socda dariiqa noloshaada. Ku soo dhawow naadiga Balaayiin durba.
Sideen lacagtayda ugu labanlaabi karaa kaydka?
Marka hore oo aad u xoojinaysa, ma jirto wax la yidhaa “taajirnimo degdeg ah”. Taasi waa khuraafaad, mid xun sidoo kale.
Abuuridda maalka waxay qaadataa waqti, dadaal, edbin, JOOGTIN, mar kale joogteyn, joogtayn xoogaa ah iyo xoogaa dulqaad ah. Taasi waa sababta inta badan loo dhaho adiga, “… kobciso maalka.”
Hadda, sidee baad lacagtaada ugu labanlaabi kartaa kaydka? Run ahaantii ma jirtaa wax la mid ah “ku labanlaab lacagtaada kaydka?”
XIDHIIDHKA: Lacagta Kaarka Hadiyadda Ku Wareeji Koontada Bangiga | Tilmaan-Talaabo-Tallaabo-fudud oo fudud 2022-ka
In kasta oo “lacagtii laba -laab -laabka ahayd” ay ka faa’ideysteen khiyaameeyayaashu si ay u khiyaaneeyaan iftiinka maalinta ee rajada dadka ee nolosha, laba -laabka lacagtaadu waxay macnaheedu noqon kartaa, “KU -BIXINTA lacagtaada si aad u hesho soo -celin.”
Soo -noqoshada intooda badani xitaa uma imaan karaan 50% dulsaar, si kastaba ha ahaatee, maalgashiyo badan oo aad samayso, ayaa lacagtaadu sii kordheysaa.
Markaa, intaadan laba jibaari karin lacagtaada habeenka, waxaad samayn kartaa maalgelin aad u caqli badan oo hodankaaga u kori karta waqti ka dib. Taasi waa sida kaliya ee aad lacagtaada ugu labanlaabi karto kaydka. Waxa aad u baahan tahay inaad barato hadda, waa sida lacag looga helo kaydka.
Maxaan ku samayn karaa lacag xad -dhaaf ah koontadeyda kaydka?
Sharciga ugu horreeya ee lacagta aniga, waa QIIMAHA ay keento. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha aad ku bixiso lacagta, ayaa ah qiimaha ay adiga kugu leedahay. Haddii aad ula dhaqanto lacag sida aad muhiim u ah, waa isku mid.
Maxaan ku leeyahay? Dareen -celintaada ugu horreysa ee lacagtu waa inaysan noqon inaad "qarashgareyso". Halkii, ka fikir sida aad u tarmi karto. Tani waxay ii horseedaysaa inaan ka jawaabo su'aashaada, "maxaan ku samayn karaa lacag xad -dhaaf ah koontadeyda kaydka?"
Jawaabtaydu waa mid fudud sida runtu tahay, “Ku shub dhammaan lacagtaas xad -dhaafka ah koontadaada kaydka!”
Maxaa ka faa’iido badan oo aad ku samayn kartaa? Waxba runtii. Markaa, haddii aad meel kasta lacag aad u badan ka raadsato, raadso maalgashiyo lagu kalsoonaan karo oo ku rid lacagtaas xad -dhaafka ah, soo -celintaadu waxay caddayn doontaa go'aankaas inuu yahay mid aad u faa'iido badan.
Intee in le'eg ayay tahay inaan keydsado ka hor intaanan maalgelin?
Iyada oo ku xidhan inta aad iska dhigayso, haddii aad tahay badbaadiye gardarro ah, waa inaad diyaar u ahaataa inaad maalgashato kaydka 5 - 8 bilood kadib.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan ahayn badbaadiye gardarro ah laakiin aad qaaddo tallaabooyinka ilmaha ee keydinta, waxaad u baahan doontaa edbin badan iyo ilaa sanado kayd ah oo mudan in la maalgashado.
Si kastaba ha ahaatee, ma jiro xukun adag oo degdeg ah. Waxaan ku sharxi doonaa sidan; halkaas oo mushaharkaygu bishii yahay $ 1000 oo aan awoodo inaan keydiyo $ 550 bishii, Haddii aan helo maalgashiyo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan $ 500, waxaan si habboon u isticmaali karaa kaydka bil kaliya si aan u sameeyo maalgashiyadaas.
Kaliya ogow in marka lacagtu sarreyso, ay sii badan doonto maalgelinta faa'iidada badan-soo-noqoshada. Maalgashiyada sare waxay keenaan dib -u -celin sare, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin khataro badan oo iyaga ku xiran inta badan.
Miyaan si wax ku ool ah wax u kaydin karaa aniga oo aan Bixin Kaydkayga?
Kaydinta dakhliga ku soo gala runtii waxay noqon kartaa mid adag, gaar ahaan marka ay si lama filaan ah kuugu dhacdo xaalad degdeg ah oo aadan garanayn meel kale oo aad lacag ka hesho si aad dhibaatadaas u xalliso. Waxa xiga ee aad u malaynayso waa kaydkaaga, waad ku mahadsan tahay oo kaliya lacag aad meel ku qarsatay.
Nasiib darrose, keydintaada looma jeedin in lagu xalliyo xaaladaha degdegga ah, ee waxaa loola jeedaa in lacag badan laguugu soo saaro.
Waxaa jira hal dariiqo oo kaliya oo aan ogahay inaad si wax ku ool ah u badbaadin karto adigoon qarash gareynin keydintaada, waa inaad lacagtaada dhigto meel aadan ku bixin karin.
Bangiyada qaarkood waxay leeyihiin ikhtiyaarro kayd oo aad lacagtaada uga tagto muddo go'an adiga oo aan la bixin. Qasab ma aha hadda in la dhigo koonto go'an oo go'an, laakiin waa nooc ka mid ah kaydka doofaarka oo aad ku kaydin karto lacag bille ah ama toddobaadle ah oo leh xaddidan ka-bixitaannada illaa waqti go'an.
Istaraatijiyad ahaan, ujeedadu waa in la barto kaydinta iyada oo aan la faragelin lacagta, ugu yaraan, ka hor intaadan horumarin hab -nololeedka kaydinta edbinta leh.
Sida Lacag Looga Sameeyo Kaydinta
Hantida ummaddu waxay ku tiirsan tahay barwaaqada dhaqaale ee gaarka ah ee shakhsiyaadka ummaddaas.
Sida uu sheegay George Clason,Ninka ugu taajirsan Baabuloon", Baabuloon waxay noqotay magaaladii ugu qanisanayd adduunyadii hore waayo muwaadiniinteedu waxay ahaayeen dadka ugu taajirsan waqtigoodii. Waxay qiimeeyeen qiimaha lacagta. Waxay ku dhaqmeen mabaadi'da maaliyadeed ee hufan si ay lacag u helaan; haysashada lacagta iyo samaynta lacagtooda lacag badan ayay kasbadaan. Waxay naftooda u siiyeen waxa aan dhammaanteen rabno; dakhliga mustaqbalka.
Si aad lacag uga hesho kaydka, WAA INAAD lacag soo iibsataa, lacag haysataa (Kaydso) ka dibna ka dhig wixii dheeraadkaaga ah (kaydka) lacag badan. Halkaan waxaa ah mid aad u cad, hawl yar laakiin talaabooyin abaal marin ah oo ku saabsan sida aad lacag uga heli karto kaydka.
1. Ogow kuna dhaqan Shanta Xeer ee Lacagta
Adigoo daneynaya kobcinta kaydkaaga si aad lacag badan kuugu hesho, waxaad u baahan doontaa inaad baratid oo aad ku dhegto 5ta sharci ee lacagta.
XIDHIIDHKA: 10 Majalado Maaliyadeed ee ugu Fiican Online Go'aannada Ganacsiga Xog -ogaalka ah ee 2022
Shanta Xeer ee Lacagta
Lacagtu waxay ku timaadaa si farxad leh oo aad u kordhisa nin kasta oo ku bixin doona wax ka yar toban meelood meel dakhligiisa si uu ugu abuuro hanti mustaqbalkiisa iyo tan qoyskiisa.
Dahabku wuxuu u dadaalaa oo ugu qanacsan yahay milkiilaha caqliga leh oo u arka inuu faa'iido u leeyahay
shaqaalaynta, iyagoo u tarmaya xataa sida adhiga duurka.
Lacagtu waxay ku dhegan tahay badbaadinta milkiilaha taxaddarka leh ee ku maalgeliya talada ragga caqliga leh sida loo maareeyo.
Dahabku wuu ka siibtaa ninka ku maalgeliya meherado ama ujeeddooyin uusan aqoon u lahayn ama aan oggolaanin kuwa xirfadda u leh haynta.
Lacagtu waxay ka carartaa ninka ku qasbi lahaa dakhli aan suurtogal ahayn ama raaca talooyinka soo jiidashada leh ee khiyaameeyayaasha iyo dhagar -qabayaasha ama ku aamminsan khibraddiisa gaarka ah iyo rabitaannada jaceyl ee maalgashiga.
2. HABEEYA LACAGTAADA
Mid ka mid ah buugaagtaydii ugu fiicnaa abid ee maareynta maaliyadda; Haweeneyda Lacagta Caqliga leh by Arese Agwu, qoraagu wuxuu lahaa erayadan waaweyn ee xigmadda leh ee ku saabsan samaynta miisaaniyad waarta;
U samee baaldiyo ujeeddooyin kala duwan. Hayso xisaabaadyo kala duwan oo loogu talagalay ujeeddooyin kala duwan, oo lagama maarmaan ah;
Xisaabta xaaladaha degdegga ah maxaa yeelay, ma ogid goorta baabuurkaagu jaban yahay ama marka aad leedahay xaalad degdeg ah oo caafimaad oo lama filaan ah.
Koonto 'soo noqosho' ah maxaa yeelay waxaan u shaqeynaa si adag si aan si adag u ciyaarno. Haddii kale, waxaad isu diyaarin doontaa kharash -dhaaf, taas oo halis gelin doonta xorriyaddaada maaliyadeed mustaqbalka fog. (Tani waxay noqon kartaa dukaamaysiga, socdaalka, wax kasta oo ku farxad geliya). Qorshaynta waxaa loola jeedaa inaad si maan -gal ah iyo miisaaniyad ku jirto u isticmaashid, halkii aad si xarago leh u bixin lahayd.
Koontada kirada maxaa yeelay way fududahay in dib loo dhigo oo la sugo saddex ama afar bilood ka hor intaanay dhibaatadu ku soo raadsan ka dibna aad bilowdo argagax iyo amaah. Had iyo jeer way fiican tahay inaad yeelato koonto u gaar ah tan aad si nidaamsan iskaga dhigto bil kasta (tani waxay u shaqaysaa khidmadaha dugsiga sidoo kale).
Koontada maalgashiga maxaa yeelay, dhib ma leh in si adag loo shaqeeyo, sannadba sannadka ka dambeeya, wax badan la kasbado, la wada isticmaalo, dabadeedna saafigaagu xitaa ma aha ilaa rubuc dakhligaaga sannadlaha ah. Waxaa fiican inaad si nidaamsan dhinac iska dhigto qayb ka mid ah mushaharkaaga si aad u dhisto hantida ku siin doonta dakhli.
Koontada biilasha maxaa yeelay bixinta biilasha aad bay qaali u tahay- tani waxay dabooshaa cuntada, mushaharka shaqaalaha guriga, kharashyada gaadiidka, iwm.
3. Sameynta Miisaaniyad waarta
Mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee dadku ka cawdaan marka ay timaaddo lacagtooda ayaa ah inaanay garanayn sida loo kaydsado ama loo sameeyo miisaaniyad. Dadku waxay ereyga “miisaaniyad” ku xidhiidhiyaan gabaabsi ama hoos u dhaca saldhigga nolosha. Sidaa darteed, “miisaaniyad” waa eray ay u yimaadaan inay ka cadhoodaan.
Xaqiiqdu waxay tahay, miisaaniyaddu waa wax kuu sheegaya sida loo qoondeeyo kheyraadkaaga waana inay ka tarjumeysaa waxaad qiimeyso. Markaa haddii aan eegay bayaankaaga bangiga, ma ka tarjumaysaa inaad ku kharash garayso waxyaabaha aad jeceshahay mise waxay ka tarjumaysaa xaqiiqda ah inaadan si ulakac ah u bixin oo aad u oggolaato in lacagtaada dhinacyo kala duwan loo jiido?
Sababta ay dadka badankoodu ugu nool yihiin jeegga mushaharka si ay u bixiyaan jeegga waa iyada oo aanay si buuxda u fahansanayn waxa dakhligoodu ku taageeri karo. Lacagta bangiga ku jirta waxay la mid tahay kharashaadka. Macno malahan haddii aad kasbato toban kun ama toban milyan oo naira bishii, kheyraadkaagu wuu xadidan yahay oo isticmaalku wuxuu ku kici karaa dakhli, marka waa muhiim inaad yeelato qorshe kharaj oo taas tixgelinaya.
Marka waa tan khiyaamadii kharash-la'aanta dambi-la'aanta: miisaaniyadda lacagta caqliga badan!
Miisaaniyadda lacagta caqliga leh
Miisaaniyadda lacagta caqliga lihi waa hab loo qoondeeyo ilahaaga. Marka hore, dakhligaaga u qaybi saddex qaybood:
Hadafyada maaliyadeed ee mustaqbalka fog
Hadafyada maaliyadeed ee muddada-gaaban
Hadafyada maaliyadeed ee muddada-dheer (LFG): Ugu yaraan boqolkiiba labaatan dakhligaaga, waxay u taagan tahay saamiga loo qoondeeyay hagaajinta qiimahaaga saafiga ah, tusaale ahaan iibsashada hantida ku siin doonta dakhli. Tusaalooyinka wanaagsan waxay ku wajahan yihiin iibsashada sida dhulka, hantida ama faylalka saamiyada.
XIDHIIDHKA: Madal Ganacsi Waraaqaha Ugu Fiican 2022 | Simulators ugu Fiican
Hadafyada maaliyadeed ee muddada-gaaban (SFG): Saamiga dakhligaaga oo loo qoondeeyay daawaynta-boorso Chanel, iPhone, ama fasax raaxo leh; wax kasta oo aad rabto. Kharashka nolosha: Kharashkaaga billaha ah ee kiradaada, caymiska caafimaadka, telefishanka fiilada/dayax -gacmeedka, batroolka, khidmadda adeegga iwm.
Halkan waxaa ah laba tusaale oo ku saabsan sida dakhliyada kala duwan ay u ekaan karaan mushahar qaybinta.
Dakhliga Billaha ah ee Claire = $ 3,000,000
LFG (20%) = $ 600,000
SFG (10%) = $ 300,000
Kharashka nolosha (70%) = $ 2,100,000
Dakhliga Billaha ee Floy = $ 600, 000
LFG (20%) = $ 120,000
SFG (10%) = $ 60,000
Kharashka nolosha (70%) = $ 420,000
Hab kale oo miisaaniyadeed: U -dhawaanshaha Dave Ramsey
Dhinaca kale, waad korsan kartaa Dave Ramsey (istaraatijiyad dhaqaale oo caan ah) sidoo kale. Isaga badbaadinta laga cabsado ayaa sidaas lagu gaari karaa;
Bixinta Samafalka: 10%
Kharashka Shakhsi ahaaneed: 5%–10%
Kala duwan: 5%–10%2ï »¿
4. LASOCO KHARASHKAADA
Dadka badankiisu ma yaqaaniin halka lacagta ay shaqaystaan ​​ay gasho. Dakhli intee le'eg ayaa ku soo gala cuntada? Gaadiidka? Dharka? Sida meherad kasta oo guuleysata oo aad ula socotid dakhliga iyo kharashaadka xilliyeedka, waxaa kale oo muhiim ah in lala socdo kharashaadka nolosheena gaarka ah.
Dadka qaar wax fikrad ah kama qabaan inta ay ku kacayso hab nololeedkooda. Waxaa laga yaabaa inaysan si taxaddar la'aan ah u qarashgareyn, laakiin waxay si miyir -qab ah u kobciyaan caadadooda kharashaadka - wanaag ama xumaan. Haddii aadan si xushmad leh ula dhaqmin lacagta aad shaqaysato, waxay ku reebi doontaa ixtiraam la'aan. Waa inaad barataa inaad si ula kac ah wax u kharash garayso adoo u qoondaynaya ilahaaga si aad u muujiso qaab nololeedka aad rabto oo aad awoodo inaad si joogto ah u awooddo.
Waxaas oo dhami waxay ka bilaabmayaan in la helo fikrad cad oo ah meesha ay lacagtu ka socoto marka hore. Waa inaad ka tanaasusho marmarsiyada oo aad baratid sida loo xakameeyo lacagta halkii aad lacagtu ku maamuli lahayd.
Talaabooyin wax ku ool ah si loola socdo Kharashkaaga
Qor wax kasta oo aad ku bixisay dakhligaaga bishii la soo dhaafay. Tani waxay ku siin doontaa fikrado wanaagsan oo ku saabsan sida aad u kharash gareyneyso lacag waxayna kaa caawineysaa inaad ogaato aagagga aad jarayso ama kordhineyso.
Dib u eeg bayaannada bangigaaga laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay.
Kala saar natiijooyinkaaga baahiyaha iyo baahiyaha. Xaddid rabitaankaaga oo kala hormari baahiyahaaga.
Aqoonso saddex illaa shan waxyaalood oo la gooyo bil kasta taas oo saamayn weyn yeelan doonta. Dib -u -eeg waxa aad ku kharash garayso waxyaabo ay ka mid yihiin wicitaannada taleefankaaga iyo cuntada maxaa yeelay kuwani waa tusaalooyin waxyaabaha muhiimka ah laakiin waxaan u badinnaa inaan ku bixinno si maan -gal ah. Qiimee kharashyada aad ku bixisay aagaggan oo dejiso xadka kharash -bixinta.
Ku qarash garee waxyaabaha aad jeceshahay oo si aan naxariis lahayn u yaree kharashyada waxyaabaha aan adiga ku khuseyn.
5. Maalgeli, Maalgeli, Maalgeli!
Nuxurka kaydinta marka hore waa si aad u maalgashan karto lacagtaas oo dhan. Xusuusnow in kaydintayadu aysan ahayn mid loogu tala galay in lagu xalliyo xaaladaha degdegga ah ee ay tahay KALIYA maalgashiga, si fudud, dib u soo celinta lacagteena kaydsan ee adag.
Kahor intaadan maalgashan, fikrad ka hel maalgashiyo lagu kalsoonaan karo oo aad u marin karto lacagahaaga. Weydii su'aalo aad u daran. Kaliya ha iska tuurin lacagahaaga.
Maalgashiyada la aamini karo, faa'iidada badan leh laakiin maalgashiyada halista badan leh waxay caddayn karaan inay qiimo leeyihiin mustaqbalka fog. Maalgashigaas waxaa ka mid ah;
Bonds -ka labada dhinac
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan maalgelin, waxaad dooneysaa inaad weydiiso xoogaa su'aalo qotodheer ah si aad laba jeer u hubiso maalgashadayaashaadu inay ogaadaan waxay sameynayaan.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan doontaa xeerarkan qotodheer si aad u hagto go'aankaaga;
dejinta hadafyadaada maalgashi
in la sameeyo istaraatijiyad maalgashi;
soo qaado shirkad maalgashi.
Ugu dambayntii, si aad u kobciso kaydkaaga, raac kuwa abuura hantida hantida leh. Waxaan si xoog leh kugula talinayaa inaad wax akhrido Arese Agwu taxaneheeda Smart Money iyo George Clason ee halyeeyga ugu taajirsan Baabuloon.
Waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in kastoo, waa edbintaada, adkaysigaaga iyo dhammaan fikirkaaga WANAAGSAN.
Wax kasta oo aad sameyso, ha joojin kaydinta, ha ka joojin inaad noqoto BILLIONAIRE -ka xiga! Farxad si aad u abuurto hanti.
Dib -u -eegista Gettefrone.com 2022: Sideen ku hubnaa inaysan ahayn khiyaano?
7 Siyaabood Oo Sharci Ah Sida Loo Helo Bitcoins Bilaash 2022 | Gebi ahaanba Bilaash
Sida Loo Sameeyo Lacag Iibsasho Iyo Iibinta Cryptocurrency Sanadka 2022 | Tilmaan Buuxo
10 Barnaamijyada Shukaansiga Furry ee ugu Fiican 2021 | Ku raaxayso Jaceylkaaga
Dib -u -eegista Ventures -ka Adduunka 2021: Fadeexad kale oo Adeegga Safarka ah ama Maxay tahay?
Dahabku ma Maalgelin Wanaagsan baa? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Maalgashadayaashu waxay ku maalgashan karaan dahabka iyagoo adeegsanaya lacagaha lagu kala beddelo (ETFs), ka iibsashada saamiyada dahab-qodoyaasha iyo shirkadaha la xidhiidha, iyo…
Sida Loogu Deeqo Twitch | Tilmaan-Talaabo Talaabo-Fudud oo Fudud
Daawashada fiidyowgu waxa ay si dhab ah u korsadeen shakhsiyaadka adduunka oo dhan. Halka YouTube uu hogaaminayo jaantusyada…
Dib -u -eegista App -ka Nicehash 2022: Sida Lacag Loogu Sameeyo | Sharci ama Fadeexad
Marka ay timaado ka ganacsiga aaladaha loo yaqaan 'crypto platforms', dadku waxay si taxadar leh u falanqeeyaan. Tani waa sababta oo ah khiyaanooyinka ayaa baxay…
Sida Lacag Loo Weydiisto Saaxiibbada Ama Kuwa Jecel | Talooyin Caddeysan
Shantii sano ee aan bartay maamulka maaliyadda, waligeed ma ahayn fikradda 'sida lacag loo weydiisto...